Nabadlali mabeseke abantulayo kulolu sizi - Ilanga News
Home Izindaba Nabadlali mabeseke abantulayo kulolu sizi
Nabadlali mabeseke abantulayo kulolu sizi
KUPHONSELA inselelo namanye amabhizinisi amakhulu aseNingizimu Afrika ukwelula isandla kwe-Orlando Pirates, iKaizer Chiefs nabakwaMultiChoice okuthe ngoLwesithathu olwedlule bamemezela ukuthi bazonikela ngezinsiza ezisebenzini zikahulumeni ezisekhaleni lokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19 esidlule nenqwaba yemiphefumulo emhlabeni.
Lolu bhubhane sekucacile ukuthi uhulumeni ngeke alunqobe nxa eyedwa, kodwa udinga ukwelekelelwa nayizinkampani ezizimele ukuze ludambe. I-Pirates neChiefs balandelwa yizinkumbi eNingizimu Afrika, okwenza konke okuthinta lezi zinkunzi zikanobhutshuzwayo wakuleli, kusabalale kalula emphakathini.
Lezi zinkunzi zaseSoweto zibambe elikhulu iqhaza ekunqandeni ukubulalana kwabalandeli bazo, kanti ziphinde zabamba iqhaza ekuqedeni udlame lwezepolitiki obeludla lubi ikakhulukazi KwaZulu-Natal phakathi kwe-ANC ne-IFP eminyakeni edlule. Kuvele kumqoka ukuthi abezemidlalo benze okuthile ukulwisana nalolu bhubhane njengoba bekwazi ukuhlanganisa abantu bemikhakha eminingi ngesikhathi esisodwa.
Isenzo seziMpofana neBucs, sishiya inselelo nakwezinye izinkampani okumiswe izinto eziningi ezweni zenza inzuzo ebhekile. Siyakuqonda ukuthi izinkampani kayikho inzuzo eziyenzayo njengoba izwe livalwe thaqa ngenxa yokuzama ukunqanda ukusabalala kwaleli gciwane.
Yize kunjalo, kodwa siyafisa ukubona le nqwaba yosomabhizinisi abazixebulela umkhomo kumathenda kahulumeni, bephonsa esivivaneni emizamweni kahulumeni yokulwa nalo mkhuhlane.
Kumqoka nokuthi izinhlaka zezomthetho kuleli zibaqaphe ngeso lokhozi osopolitiki abasezikhundleni eziphezulu kuhulumeni njengoba kwaziwa kahle ukuthi kayilandelwa imicikilisho emide yokukhishwa kwamathenda nxa kunesimo senhlekelele ezweni.
Phela kulapho okuvamise ukuthi imali eningi kahulumeni inyamalale khona ngoba kusuke kwaziwa kahle ukuthi kuzovikwa ngokuthi kukhishwe imali eningi ngoba isimo besiphuthuma, singekho isikhathi sokukhangisa ngamathenda. Njengoba izikhulu zikahulumeni zishumayela ivangeli lokuthi abathengisa izinsiza zokunqanda lolu bhubhane bangawenyusi amanani, nazo-ke (izikhulu) siyazinxusa ukuhambela kude nokunxenxa osomabhizinisi ukuba benyuse amanani ezidingo zomphakathi ukuze zizocosha amaqatha agangile ogqokweni.
Bekungaba kuhle ukuthi namaqembu aphikisayo akulandelisise ukuthi imali yabakhokhi bentela isetshenziswa ngendlela efanele, kungagcini sekukhona abahlomula ngosizi olugubuzele izwe nomhlaba wonke.
Phela kunosopolitiki bakuleli abakhombisa isibindi, beqhuba izenzo zenkohlakalo ngokushona kukaNelson Mandela owaba ngumengameli wokuqala wentando yeningi kuleli. Nxa abantu bekwazi ukweba egameni likaMadiba, bangehlulwa yini ukuntshontsha nxa abantu bexakwe wusizi lweCovid-19?
Lo mkhuhlane usivezele nokuthi likhulu igebe lezomnotho phakathi kwabadlali bakuleli nabakwamanye amazwe.
Emazweni amaningi abadlali besenikele ngezinto eziningi ukuze kunqandwe lo mkhuhlane. Kubona kubalwa nabase-Afrika. Sisalindele ukubona abadlali bePremier Soccer League (PSL), abebhola lombhoxo nabekhilikithi benza okuthile uku-hlenga umphakathi ohlale uphuma ngobuningi uyobeseka ezinkundleni. Abantu abantulayo, yibonake asebedinga ukwesekwa ngabadlali kulesi simo.
Previous articleAbafundi badinga ukufundiswa ngqo ngothisha
Next articleSizophila neCovid-19 impilo yethu yonke